Uthwele kanzima umphakathi waseWillowfontein ngodaba lwamanzi | Eyethu News
Grace Mugabe to go to court over R18-m diamond ring - 4 hours ago
Uthwele kanzima umphakathi waseWillowfontein ngodaba lwamanzi
“Sebewacela emizini yabantu eMbali Unit 18.”
Amanye amalunga omphkathi aseWillowfontein ephuma ukuyo kha amanzi eMbali Unit 18. Isithombe : Lethiwe Makhanya
UKUNGABIKHONA kwamanzi endaweni yaseWillowfontein cishe zonke izinsuku sekuphoqe lomphakathi ukuthi uthwale amabhakede uyocela amanzi ezindaweni ezingomakhelwane ukuze bakwazi ukwenza izidingo zabo zamihla yonke.
Lomphakathi uthi kusukela ngonyaka owedlule amanzi ayahlupha kulendawo njengoba abuye abuye kwezinye izingxenye kodwa kwezinye awekho qobo kanbti sekuphele izinyanga ezili-11 kwenzeka loku.
Elinye ilunga lomphakathi elihlala kulendawo lithe indaba yamanzi isibahlukumeze kakhulu kangangokuba sebeze baphelelwa nawumndlandla wokuyilwela lenkinga ngoba vele akubasizi ngalutho akwenzeki lutho.
“Umuntu usethembele kumaloli amanzi afika izinsuku e zinhlanu kuphela ngesonto, ngoba ngempelasonto awafiki. Nokufika kwawo afika ngezikhathi zasemini abantu abaningi sebekemsebenzini okusho ukuthi makungekho muntu ekhaya uzosala kanjalo ungenawo amanzi. Umphakathi usukhathele ilendaba yamanzi njengoba ungasazixaki nangokuteleka nje,” kubeka lona.
Elinye ilunga lomphakathi lithe lona selisizwa ukuthi uma lomile lithenge unomenaydi ukuze kongeke amanzi. “Usibona kumanje nje asidlile ngoba sinawo amanzi. Mina sengiwumuntu omdala angikwazi ukuthwala amabhakede ngiyocela amanzi ngaphesheya eMbali Unit 18. Ngithatha yona lemali encane ngizame ukuthenga into engizoyiphuza ukuze nginge amanzi.”
Ngesikhathi leliphephandaba lihambele lendawo lihlangane namalunga omphakathi kanye nezingane bewela namabhala anamabhakade beyokha amanzi embali Unit 1 8 abanye bephuma ukuwasha khona.
Kungesikhathi beyodlula endaweni engumhosha nehlathi bephuma ukuyokha amanzi. Isithombe :Lethiwe Makhanya
Liphinde lathola ukuthi amanye amalunga omphakathi aze ancamele ukuwasha emfuleni ngenxa yokungabikhona kwamanzi kanti kwezinye izindawo amaloli athwala amanzi abuye angafiki.
Funda olunye udaba lapha : Bahleli emakhaya abafundi abaxoshelwe ukuluka eSukuma
Kuzokhumbuleka ukuthi leliphephandaba like labika izikhathi eziningi ngenkinga yamanzi kulendawo ngesikhathi umphakathi ushisa amathayi uvale umgwaqo.
Ikhansela lakulendawo uMnu Thabiso Molefe akatholakalanga ukuphawula njengoba ucingo lwakhe belukhala lungabanjwa kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela.
Kugwetshwe othi inyanga yathi akalale nembongolo ukuze aqine